Xiddigaha geeska oo soo saaray hees ka duwan kuwii hore “Afkeygow qolo ma tihid” – Balcad.com Teyteyleey
Xiddigaha geeska oo soo saaray hees ka duwan kuwii hore “Afkeygow qolo ma tihid”
By admin	 On Jul 15, 2017
Kooxda Fanka Xiddigaha geeska ayaa markii ugu horeysay soo saaray hees cusub oo ka duwan kuwii hore, waxaana heestaan alifay abwaan Xasan Dhuxul Laab-saalax si wadajir ah u qaadaya ilaa afar fannaan oo kooxdaasi ka tirsan.
Heestaan cusub oo lagu magacaabo “AFKEYGOW QOLO MA TIHID” ayaa ah mid wadani ah oo lagu weyneynayo luqadda afka Soomaaliga ee ay ku hadlaan inta badan Soomaalida degta geeska Afrika.
Shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay heestaan cusub oo ay soo saareen Xiddigaha Geeska, maadaama horay looga bartay heeso iyo maansooyin ay ku ammaanayaan gobolada iyo magaalooyinka Somaliland.
Ereyada heestaan cusub oo soo jiidatay dareenka shacabka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah tuducdaan:-
AFKKEYGOW QOLO MA TIHID
QABIIL GAAR AH MA TIHID
QOF GAAR KUU LIHI MA JIRO
QOLOBA QOLO DIIDAN TAHAY
Muuqaalka heestaan cusub ayaa waxaa ka dhex muuqda fannaanka C/raxmaan Cirro oo boorso garabka u suran tahay isla markaana u muuqda qof socdaal ah, lamana oga tallaabada ay qaadeyso xukuumadda Somaliland oo iyadu horay u xirtay qaar ka mid ah fannaaniinta kooxda Xiddigaha Geeska oo Muqdisho tegay hadana bartamaha magaalada Hargeysa ku qaaday hees shaki gelineysa madax bannaanida Somaliland.
The post Xiddigaha geeska oo soo saaray hees ka duwan kuwii hore “Afkeygow qolo ma tihid” appeared first on Ilwareed Online.
Ra’iisul Wasaare Kheyre “Ma jiro wax khilaaf ah oo u dhaxeeya Xukuumadda iyo Baarlamaanka”
Mooshinkii ka dhanka ahaa R/W Kheyre oo laba arrin lagu xaliyey…